Platinum Tools® Announces New Unloaded Patch Panels; Now Available – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Home » သတင်း » ပလက်တီနမ်Tools®နယူးချ Patch Panel များကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်; ယခုရရှိနိုင်
ပလက်တီနမ်Tools®နယူးချ Patch Panel များကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်; ယခုရရှိနိုင်
NEWBURY PARK, Calif., Nov. 7, 2018 XCHARX Platinum Tools® (www.platinumtools.com), the leader in solutions for the preparation, installation, hand termination and testing of wire and cable, is proud to announce the launch of the new shielded and unshielded Unloaded Patch Panel line. The new 24- and 48-port line is now available.
အပိုဆောင်းစျေးနှုန်းနှင့်ပလက်တီနမ် Tools များနှင့်၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်လိုင်းပေါ်တွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.platinumtools.com, ခေါ်ဆိုမှု (800) 749-5783, ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်က info@platinumtools.com.
Platinum Tools® Debuts New Waterproof RJ45 Coupler System; Now Available - နိုဝင်ဘာလ 13, 2018
ရီးရဲလ်အချိန်အတွက်တွင်-ဆိုက်ကို CRAS ကျောင်းသားများရထား Phoenix မြို့အတွက်သဘေ်ာ Raceway မှာတိုက်ရိုက် NASCAR နိုင်သလား-Am 500 လူမျိုးစဉ်အတွင်း - နိုဝင်ဘာလ 12, 2018
ပလက်တီနမ်Tools®နယူးချ Patch Panel များကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်; ယခုရရှိနိုင် - နိုဝင်ဘာလ 7, 2018
ယခင်: TSL ကုန်ပစ္စည်းများအမေရိကန် SMPTE အခန်းကျောင်းသားန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ် Ed Sheeran '' Divide '' Tour FOR FREESPEAK II ကို wireless comm အဖြေ, ကယ်တင်တတ်၏
Keynote 2018 NAB Show ကိုနယူးယောက်မြို့မှ Robert De Niro
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ပလက်တီနမ်Tools®နယူးချ Patch Panel များကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်; Now ကိုရရှိနိုင်" ။ https://www.broadcastbeat.com/platinum-tools-announces-new-unloaded-patch-panels-now-available/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။